Jubbaland oo cambaareysay mas'uuliyadda darrada uu ku kacay Farmaajo (War-saxaafadeed) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jubbaland oo cambaareysay mas’uuliyadda darrada uu ku kacay Farmaajo (War-saxaafadeed)
Maamulka Jubbaland ayaa taageeray, kuna bogaadiyey Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Federaalka Maxamed Xuseen Rooble ee uu ka qaatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu cambaareeyay mas’uuliyadda darrada uu ku kacay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo ee uu ku xagal daacinayo go’aanadda iyo mas’uuliyaddaha Ra’iisal wasaaraha.
Previous articleFarmaajo: Dowladnimadii Ma wuxuu ka doortay Dantiisa gaarka ah iyo Badbaadinta Saaxiibkiis Fahad..?
Next articleCeydiid Ilka-xanaf: “Farmaajo waa ku khaldan yahay inuu shaqada kusii hayo Fahad Yaasiin, mana laha…”